Guddiga siyaasadda, qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah ee wakiillada Puntland oo su’aalo weydiiyay wasiirka qorshaynta – Kalfadhi
Guddiga siyaasadda, qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah ee wakiillada Puntland oo su’aalo weydiiyay wasiirka qorshaynta
Guddiga siyaasadda, qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah ee golaha wakiillada Puntland ayaa maanta fadhi la yeeshay wasiirka wasaaradda qorshaynta Cabdiqafar Cilmi Xaange iyo madaxda kale ee wasaaradaas, sida lagu sheegay war ka soo baxay guddiga.
Waa kulankii ugu horeeyay ee ay yeesheen guddiga iyo wasaaradda qorshaynta ee Puntland si ay wada-shaqayn dhow u yeeshaan.
Guddiga siyaasadda, qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa la xisaabtan iyo korjoogtayn ku leh wasaaradda iyo hay’adaha kale ee qaabilsan siyaasadda.
Gudoomiyaha guddiga Xildhibaan Cabdiraxmaan Diiriye Carab ayaa shirka gudoominayay, waxaana looga wada-hadlay qodobo aan la faahfaahin oo khuseeya wada-shaqaynta iyo hannaanka isla xisaabtanka ee labada dhinac.
Guddiga ayaa su’aalo weydiiyay wasiirka iyo masuuliyiinta kale ee wasaaradda ka socday, sida lagu sheegay warka ka soo baxay guddiga.
Guddiyada golaha wakiillada Puntland ee la dhisay bishii febraayo ayaa teer iyo Abriil waxay ku hawlanaayeen kulamo iyo wada-tashiyo ay la yeelanayeen hay’adaha dowladda ee ay kor-joogtaynta iyo la xisaabtanka ku leeyihiin.
Baarlamanka Puntland oo guddiga abaaraha ku wareejiyay 100 booyadood oo biyo ah